စံဝင်းချို Daily Hope Talk to Your Kids
“ယနေ့ငါမှာထားသော စကားကို နှလုံးသွင်းရမည်။ ထိုစကားကို သင်၏ သားသမီးတို့အား ကြိုးစား၍သွန်သင်ရမည်။ အိမ်၌ထိုင်လျက် နေသည်ဖြစ်စေ၊ ခရီး၌သွားသည်ဖြစ်စေ။ အိပ်လျက်၊ ထလျက်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ထိုစကားကိုပြောရမည်။” (တရား ၆း၆-၇)
သင်တစ်ချိန်တစ်ခါမျှတွေးမိပါသလား၊ ကလေးများကိုမည်ကဲ့သို့ဆက်သွယ်ရမည်ကိုသင်ကြားပေးရခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း၊ နောက်တစ်ကြိမ် အမြန်ပြင် အစားအစာဆိုင်ကိုသွားလျှင် ဆယ်ကျော်သက်များ အ လုပ် လုပ်တာကို အာရုံစိုက်လေ့လာကြည့်ပါ။ သင်ဘယ်နှစ်ကြိမ်လုပ်ဘူးသလဲ နှင့်သူတို့ကိုမည်ကဲ့သို့ ဆက်သွယ်ရ မည်ကိုဘယ်သူသင်ကြားပေးသည်ကိုတွေးမိပါသလား?
အမှန်တရားမှာ၊ သင်၏ကလေးသည် ဆက်သွယ်မှု ကျွမ်းကျင်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ အကယ်၍ကလေးများသည် မည်ကဲ့သို့ဆက်သွယ်ရမည်ကိုမသင်ယူခဲ့ပါက၊သူတို့၏အလုပ်အကိုင်နှင့်ဆက်ဆံရေးတွင်အခက်အခဲတွေ့ကြ လိမ့်မည်။
အမေနှင့်အဖေသည် ဆက်သွယ်ရေး ကိုအကောင်းဆုံးသင်ကြားပေးသောဆရာများဖြစ်ကြသည်။ ကလေးများသည် မိဘများနှင့်စကားပြောခြင်းဖြင့်၊ဆက်သွယ်ရေးကိုကျွမ်းကျင်ကြသည်။
ဘုရားသခင်က ပုံစံထုတ်သည်၊ မိသားစုတွင်၊ မိဘများသည် ဘုရားသခင်ကိုလိုက်နာပြီး၊ သားသမီးများကို အလားတူဘယ်လိုလုပ်ရမည်ကိုသင်ကြားပေးစေသည်။ ကျမ်းစာက။ “ယနေ့ငါမှာထားသော စကားကို နှလုံးသွင်းရမည်။” (တရား ၆း၆)
သင်ကလေးများကိုစကားပြောဆိုပါ။ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသူတို့နားလည်ရန်ဖြန့်ဝေပေးပါ။ ကျမ်းစာက သင်ဘယ်မှာရှိရှိ၊ ခရီးသွားနေသည်ဖြစ်စေ၊ နားနေသည်ဖြစ်စေ၊ ပြန်လည်ထမြောက်သည်ဖြစ်စေ။ အဓိကသော့ ချက်ကတော့၊ စကားစမြည်ပြောခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
၀မ်းနည်းဖွယ်ရာက၊ ကလေးအများ လေ့လာသင်ကြားရသည်မှာ လူကြီးများကသူတို့နှင့်စကားပြောသည်အချိန် သည်၊ သူတို့ ဗြောင်းဆန်အောင် ဆတ်ဆော့သည်အခါများမှာသာပြောဆိုကြသည်။
ဤပြဿနာကိုသင်ဘယ်လိုရှင်းမည်နည်း? သင်ကြားရသည် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ခုခံရန် ထင်မြင်ချက်မယူရန် တိုက်တွန်းပါသည်။ ခလေးများပြောသည်များမှာသိတ်အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ၊။ သူတို့ကသင်ကိုစမ်းသပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့စကားလွတ်လပ်စွာပြောကြပါစေ၊သင်သူတို့ကိုအနိုင်ယူမည့် ပုံမပေါ်ပါစေနှင့်။
သင်၏အိမ်တွင် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ထားပါ၊ စကားများများပြောရန်။ စကားပြောရန် တိကျသောအချိန် ရှိရန် သင်၏အိမ်တွင်တည်ထောင်ပါ။-- ညနေထမင်းစားသည်စားပွဲတွင်။ အကယ်၍ကလေးများစကားပြောလျှင် နောက်တစ်ချိန်ထပ်၍နားထောင်ပါ။
အနာဂတ်တွင်၊ အမြန်ပြင် အစားအစာဆိုင်တွင် ၀ယ်ယူသူသည် သင့်အားကျေးဇူးတင်လိမ့်မည်။
Tuesday May 24 2011 12:00 AM Posted by Doug Fields